Warbaahinta iyo Siyaasada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Warbaahinta iyo Siyaasada
Warbaahinta iyo Siyaasada
Waxay Ahayd Yahuud, Waxayne Sheegan jirtay Inay Tahay Qof Madow – Waa Jessica Krug
Afrikaan.so, September 4, 2020
Waa haweenay warbaahinta caalamka qabsatay maanta. Waa aqoonyahanad Mareykan ah oo shaqadeedu tahay daraaseenta farqiga u dhaxeeyo Afrika iyo qurba joogta Afrikaanka ah ayaa sheegtay inay ka been sheegtay inaysan ahayn qof madow. Takhasuskeedu waa daraasaadka Afrika iyo dadka reer Afrika ee qurbe joogga ah ayaa sheegtay in ay been ka sheegtay isirkeeda oo aanay ahayn qof madow. Jessica Krug oo ah bare wax ka dhigta Jaamacadda George Washington, ayaa qirtay in ay tahay haweenay Yuhuudiyad caddaan ah, kuna dhalatay magaalada Kansas City ee dalka Mareykanka. “Noloshayda oo dhan waxaan waday been ay colaad ku dheehantahay oo ka dhan ah …
Charlie Hebdo waa joornaal Faransiis ah, toddobaadle ah oo majaajilo ah oo la soo saaro maalin kasta oo Arbaco ah. Wargeyskaan Charlie Hebdo ee Faransiiska ayaa maanta faafiyey dacaayad uu ka sameeyey suubane Nebi Muxammad NNKH. Wargeyskan ayaa sidan oo kale 2015 u faafiyey dacaayaad ka dhan rasuulka, haseyeeshee caro ayaa ka dhalatay ficilkaas ay sameeyeen, waxa uu la kulmay weerar iyo cambaarayn xooggan. Soomaaliya ayaa kamid ahayd meelaha laga dhaliiley jariiradaasi 2015-kii. Wargeyska qaabka maadeysiga wax u qora ee kasoo baxa Faransiiska ee Charlie Hebdo ayaa dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed (NNKH), tallaabadaas oo sanadkii …
Dibad Baxyo ka Dhashay Kitaab Qur’aan ah oo La Gubay
Afrikaan.so, August 29, 2020
Ugu yaraan 10 qof ayaa xabsiga la dhigay, dhowr sarkaal oo boolis ahna waa la dhaawacay, rabshadahaan ayaa ka qarxay koonfurta Sweden. Dibadbaxayaasha ka soo horjeeda gubista Kitaabka Quraanka ee taageerayaasha garabka midig ee Sweden iyo booliska ayaa isku dhacay intii lagu jiray saacado badan oo rabshado ay socdeen. Baabuurta ayaa dab la qabadsiiyay, dukaammo ayaaa iyana waxyeello la gaadhsiiyey iska hor imaadkii ka dhacay magaalada koonfurta ku taal ee Malmö oo hadda la xakameeyay. Waxaa jiray dad badan oo la qabtay. Isla sidoo kale gawaadhi, ay ku jiraan kuwa amblunce-tu ayaa dhagxaan lala dhacay. Halka booliiska dalka Sweden ay …
Soomaaliya waxa ay maanta ku sugantahay marxalad kala guur ah, oo kala gaash ah, waxaa wali lagu muransanyahay habka ay dalkaan ugu dhici lahayd doorashooyin waqtigooda ku dhaca islamarkaana wadar ogol lagu yahay. Dhinaca kale madaxda dowlada dhexe oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaa uu ku doodayaa in uu dalkaan ay ka qabsoomaan doorashooyin baarlamaan oo ay shacabka Soomaaliyeed ay soo doortaan hadba xildhibaankii matali lahaa sidaasna xukunka dowladeed ee Soomaaliya lagu soo celiyo gacanta shacab weynaha Soomaaliyeed. Siyaasiyiinta iyo mucaaradka waxa ay ku micneeyeen hadalka madaxweynaha siyaabo kala duwan oo ay iyagu la tahay, qaar …
Falsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshadaWarbaahinta iyo Siyaasada
Lix bilood ka hor ayeey ahayd markii aan daawaday barnaamij laga diyaariyey jaamacado ku yaalla dalka Nijeeriga iyo Gaana. Wuxuuna ahaa barnaamij looga hadlayo tacaddiyada gabdhuhu ay kala kulmaan macaliinta iyaga oo ka dalbanaya xiriir si ay ugu fududeeyaan baahida ardayadda. Qof arday ah waxyaabo badan ayaa uga xirmi kara barayaasha. Waxaa lasoo bandhigay muuqaallo sir ah oo macalimiin laga duubay iyaga oo xodxodanaya gabdho garab uga soo baahday. Markii ugu horreysay aad ayaan uga murugooday arrintaas, waana ku bogaadiyey BBC-da barnaamjida Africa Eye(indhaha Afrika). Aad ayaan ula dhacay sida toolmoon ee looga diyaarshay muuqaalka iyo warbixinta. Taasi waxay keeni …
Doodaha ku Gaadaaman Kalsooni kala Noqoshada Xukuumaddii Xasan Cali Khayre?
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa codkii kalsoonida kala noqday xukuummadda u hoggaaminayey Xasan Cali Khayre 25/7/2020. Iyada oo goddaloolooyin badan ay ku gadaaman yihiin kalsooni kala noqoshadas ayaa haddana baarlamaanku ku andacoodoon inay xukuummadda u rideen sababo ay ugu waawayn yihiin: Dib u eegis la’aanta dastuurka Maqaamka caasumadda Amnigaoo aan waxba laga qaban iyo u diyaar garow la’aanta dooroshooyinka. Dad badan ayaa sharci darro ku tilmaamay arrintaan iyaga oo cuskanaya in arintaan aysan baarlamaanku mooshin ka keenin, ajandihii maalintaas la iskugu yimidna uusan ahayn kalsooni kala noqoshada xukuummadda ee uu ka geddisnaa, in aan xukuumadda fursad loo siin ay iskaga difaacdo eedaymaha …
Xasan Cali Khayre: Maxay Tahay Sababta Dhabta ah ee uu Xilkiisa ku Waayay?
Afrikaan.so, July 25, 2020
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaa xilka loo magacbay 23 February, 2017-kii, waxayna Baarlamaanka ansixiyeen 1 March ee isla sannadkaas. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr goor sheegay in dowladdiisa ay uga duwan tahay kuwii hore oo isaga iyo Ra’iisul Wasaarihiisa in aysan is khilafin ayna isla dhameysan doonaan muddo xileedka. Balse saaka, codeyn khilaaf uu ka taagan yahay ayey baarlmaanka sheegeen in kalsoonida ay kagala noqdeen xukuumadda uu hoggaaminayay Khayre. Saacado yar ka dibna, Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay inuu aqbalay arrintaas, wuxuuna magacaabay ra’iisul wasaare ku meel gaar ah. Maxaa sababay in “xilka laga qaado”? Ajendaha baarlamaanka kumaba jirin saaka xil …
Arrinta uu Vladimir Putin sameeyay ee Suxufiyiinta Ruushka ay ka argagexeen. Ivan Safrovov ayaa soo muuqday isaga oo gacmaha ka katiinadeysan oo loo sii wado maxkamad, waxaana garbaha hayay laba nin oo afka u xiran yahay. Taageerayaashiisa ku sugnaa afaafka hore ee maxkamadda wuxuu u sheegay in “inuusan dambiila ahayn”. Xarigga loo geystay weriyaha horay uga soo warrami jiray arrimaha militariga, waxay aragagax ku abuurtay suuufiyiinta dalkaasi Ruushka, Iyada oo ay laanta adeegga sirdoonka ee FSB ay ku eedeysay inuu basaas u ahaa laanta sirdoonka Czech, “taasina aysan macquul ahayn”. Kremlin oo ammaantay howsha ay sirdoonka qabteen waxay xariggiisa ku …
Dhiirigelinta Farsamada Gacanta
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor, April 8, 2018
Farsamada Gacanta waa shaqada ugu badan ee ay xoogsatada aduunka ku nool ku shaqeestaan, wana isha dhaqaale ee qoysas badan, farsamada gacanta waa meesha kaliya ay dalalka dunida ku kala hormareen. Tusaale:- dalalka aduunka ugu shaqaalaha badan ee shiinaha iyo hindiya waxay ku dadaalaan sidii ay u soo saari lahaayeen shaqaale tayo leh iyo dad leh wax soor farsamo gacmeed ah. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku hormareen dowladaha leh wax soorka farsamada gacanta sameenta qalab kala nooc ah ee muhiim u ah nolosha bini’aadnka. Qisadaan soo socota waa tusaale ku dayasho mudan oo ku saabsan. Nin ree …
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor, March 25, 2018
Galápagos waa jaaiirado ku yaala Ecuador kuna caan ah jinsiga xayawaano badan oo kala nooc ah. waxaa laga fuliyay nadaafad guud oo loogu magac daray dagaalka lagula jiro wasakhda iyo waxyaabaha keena deegaanka oo wasakhooba gaar ahaan wasakhda ka timaada caagaga iyo balaastiikada iyo bacaha. Iskaa wax u qabsadayaal nadiifi-yayaal ah ayaa jasiirada Galápagos ka fuliyay mashruucan nadaafada ah. Dadkii nadaafada ka waday jasiiradaa ayaa arkay qasac cabitaan ah oo leh calaamada Indonesia, kaa oo ay soo qaadeen biyaha hirarka badda. Ololihii nadaafadda dadkii waxay sheegeen in waxyeelada bee’ada ku dhaca iyo wasakh walba oo timaada inay sababteeda leeyihiin bini’aadanka …